နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လွှတ်ပေးသွားမယ်လို့ သူရ ဦးရွှေမန်း ဂတိပြုပြောကြား။ ~ အနုပညာအိမ်လေး
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လွှတ်ပေးသွားမယ်လို့ သူရ ဦးရွှေမန်း ဂတိပြုပြောကြား။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်က အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးသူရရွှေမန်းနှင့် ကြာသပတေးနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးစဉ်။ ဓာတ်ပုံ- မဇ္ဈိမ။ အချိန်ဇယား မပြောသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းထောင်များထဲတွင် ကျန်ရှိနေသေးသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို လွှတ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်ဝန်ကြီးကို ကတိပြုလိုက်ကြောင်း ဦးသူရရွှေမန်းက သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသည်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်နှင့် မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ အင်္ဂါနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်၊ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်က တွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ- မဇ္ဈိမ။ မြောက်ကိုရီးယားနှင့် စစ်ရေးဆက်ဆံမှု ဖြတ်တောက်မည်ဟု မြန်မာအစိုးရ၏ အာမခံချက်ကို အမေရိကန်ဝန်ကြီးက ကြိုဆိုလိုက်ပြီး ဒေသတွင်း တရုတ်နှင့် အင်အားပြိုင်ဆိုင်စရာ အကြောင်းမရှိဟု ပြောကြားသွားသည်။
သတင်း ( မဇ္ဈိမ သတင်း )
THURSDAY , 01 DECEMBER 2011.
လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရ ဦးရွှေမန်း မှ ဟီလာရီကလင်တန်သို့ ပြောကြားချက်
ဒီဇင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၁ မွန်းလွဲ ၄း၃၀
နေပြည်တော်ရောက် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်နှင့် ပြည့်သူ့လွှတ်တော်
ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းတွေ့ဆုံစဉ် သူရဦးရွှေမန်းက ပြောကြားချက် အချို့
အဆွေတော်၏ ခရီးစဉ်ကို ကမ္ဘာက စောင့်ကြည့်နေသည်ဟု ထင်ပါသည်။ ယခုလိုလာရောက်သည့်
အတွက် ၀မ်းသာပါသည်။ အဆွေတော်တို့ သိရှိသည့် အတိုင်း ယခင်အစိုးရလက်ထက်တွင် လွှတ်တော်
ဆိုသည်မရှိခဲ့ပါ။ သို့သော်ယခု စနစ်သစ်၏ ထူးခြားချက်မှာ လွှတ်တော်များပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ လွှတ်တော်မှာ ပြည်သူများအကျိုးစီးပွားနှင့် နိုင်ငံတော် အကျိုးစီးပွားအတွက် အဓိကထား
ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။ လွှတ်တော်ကို ခိုင်ခန့်အောင် ခိုင်မြဲအောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ပဲ ရှေ့သို့
အုပ်ချုပ်ရေး စီးပွားရေး လူမှုရေး ကိစ္စများစွာဆောင်ရွက်ရန် ကျန်နေသေး၍ ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး တိုင်းရင်းသားအရေးနှင့်ပြည်တွင်း
ငြိမ်းချမ်းရေး များတွင် နိုင်ငံသားတိုင်း All inclusive ပါဝင်ပြီး နိုင်ငံရေး လုပ်ဆောင်ခွင့်ရရေး၊ ထိုသို့
လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အတွက်၎င်း၊ တိုင်းရင်းသားညီညွတ်မှုရရေး၊ အကျဉ်းသားများ ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်း
သက်သာခွင့်ရရေး တို့တွင်လည်း အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ ကမ္ဘာ့ကုလသမ္မဂတို့နှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်မှု အပြည့်အ၀ရှိရေးတို့တွက် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒ ၊ ကုလမသမ္မဂ လုံခြုံရေး
ကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များအပြည့်အ၀လိုက်နာရေး တို့ဖြစ်ပါကြောင်း ပါရှိသည်။ YPIသတင်း ( သစ်ထူလွင် )THURSDAY , 01 DECEMBER 2011.
တီရှပ်တစ်ထည် ၁၂၅ သိန်းဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချနှိုင်ခ...
၂၀၁၂ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ရက်နေ့တွင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ...
တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဖွင့်မိန့်...
၂၀၁၂ နှစ်သစ်ကူး ဆုတောင်း စကားသံများ (ရုပ်သံ-သတင်း)...
တးဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဖွင့်မိန့်ခ...
လက်နက်ကြီး ထုတ်လုပ် ရာ တွင် သုံး သည့် ဓာတု ဗေဒ ပစ္စ...
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ကို ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ တွင် ကျင်...
အင်းစိန် ထောင်တွင် ထားရှိနိုင်သည့် အကျဉ်းသား အရေအတ...
အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ ကြိုတင် အမှာစာ ပေါင်း ၁ ,၂၅၀ ,၀၀...
အထက (၂) ကမာရွတ်၊ (စိန့်သြဂတ်စ်တင်း) ကျောင်းတွင် မီ...
လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းခြင်း နှစ်သစ် ( ရုပ်သံ-...
ဟင်္သာတမြို့နယ် ခရိုင်အောင်နိုင်ရေး ကျင်းပ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မီဘေးဒုက္ခသည်များအား သွားရောက်တေ...
ခြောက်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်များ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စံ...
ပေါက်ကွဲမီးလောင်မှုအတွင်း သေဆုံးသူနာမည်စရင်း နှင့် ...
၃၀ ရက်နေ့အတွက် BG အဖွဲ့မှ အမှတ်တရပစ္စည်း ၁၅ မျိုးေ...
ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားများ ပညာရေး ရန်ပုံငွေ ဂီတ...
ဝ ပြည် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေးပါတီနှင့် ပြည်ထောင်စု ငြိ...
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှု ကယ်ဆယ်ရေး အခြေအ...
မန္တလေးမြို့က ဘိုးဘွားပိုင်အိမ်ခြံမြေ အဓမ္မသိမ်းမှု့...
ထာဝရ တည်တံ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်နိုင်ရေး အထ...
အကြီးမားဆုံး မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဟု မီးသတ်အရာရှိကြီး...
မီးဘေးသင့် ဒုက္ခသည်များကို အလှူရှင်များ လာရောက် လှူ...
မီးဘေးကယ်ဆယ်ရေး စခန်းနေရာပြောင်းရွှေ့ 
ပရဆေး သိုလှောင်ဂိုဒေါင်မှ အပူလွန်ကဲပြီး မီးလောင်ပေ...
မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့သည့် မီးသတ်ရဲဘေ...
ရန်ကုန်တမြို့ လုံးခြောက်ခြားစေခဲ့တဲ့ မီးလောင်မှု ဆာ...
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် မီးဘေးဒုက္ခသည်များအား နိုင်...
မင်္ဂလာတောင်ညွန်မြို့နယ် ကူးတို့ဆိပ်ရပ်ကွက်အတွင်း ပေ...
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှု သေဆုံး သူ ၂၅ ဦ...
NLD အဖွဲ့ ဝင်များ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရာနေရာ...
မေတ္တာမွန် ဂိုဒေါင်ဝင်းအတွင်း ပေါက်ကွဲ မီးလောင်၊ ၁၆...
မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာတွင် ရှိခဲ့သောလူတိုင်း သတိပြုရ...
ရန်ကုန် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် စက်ဆန်း သင်္ဘောကျင်း...
စက်ဆန်း ဂိုဒေါင် ပေါက်ကွဲမှု တွင် ဓါတု အဆိပ် သင့် မ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံသို့ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြား...
လူသေများတဲ့ ရန်ကုန်မီး ( ရုပ်သံ သတင်း )
စက်ဆန်းမီးကြောင့် အိမ်ထောင်စု ၁၀၈၀ စု၊ ဆုံးရှုံးမှု ...
တနင်္သာရီမြစ်ပေါ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံက ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ...
အင်္ဂါဂြိုဟ်သိဟ် ရာသီအတွင်း ရပ်တည်မှုကလည်း ဇွန် ၂၁ ရက...
စဉ်းစားစရာ . . . . . . . . ဒီဓာတ်ပုံ
ဗိုလ်ချုပ်တပ်လှန့်သံ.. . . . . . . .ကျော်သူ
မြန်မာ - အင်ဒိုနီးရှား နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရ...
အလုပ်သမားများအပေါ် အိမ်ပိုင်မြေပိုင် ရရှိအောင် တောင...
ရန်ကင်းကျောင်း စတင် တည်ထောင်ခဲ့သူ၏ မိသားစုဝင်တွေေ...
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသူ မမီးမီး (ခ) မသင်းသင်းအေးရွှေဘ...
စင်ကာပူဗီဇာကို အလုပ်သမားကတ်ပါမှ ထုတ်ပေးတော့မည်
(၆၅) ကြိမ်မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့ မြေစိုက် ပိုစတာ ...
လွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးများ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်န...
ဘာသာပေါင်းစုံ ဘာသာရေး အဖွဲ့များ ဒေါ်ခင်ကြည် ကွယ်လွန...
ကိုဇာဂနာ ပြောသော ပြည်တွင်းသို.မရောက်သည့် ပြည်ပထောက...
အမေ့အိမ်နှင့် စေတနာဆရာဝန်များ ( ဓာတ်ပုံ သတင်း )
အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် အကျဉ်းထောင်များသ...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် တ.စ.ည ပါတီ နေရာ(၂၀)ခန့်ဝင...
၁၀၇ မီနီဘက်(စ်) ကားလိုင်း ဖျက်သိမ်း ( ယာဉ်ပိုင်ရှင...
ဒေါ်ခင်ကြည် ကွယ်လွန်ခြင်း ၂၃ နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်...
ဗကသများ အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေ စုစည်းပြီး HIV/AIDS ဂေဟာက...
တောင်ဒဂုံရှိ HIV/ AIDS စောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာသို့ သွ...
လာမည့် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားေ...
နော်ဝေနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းတွင် ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတေ...
ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး လှုပ်ရှားမှု တွံ့တေး အန်အ...
မွန်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ လာမည့်ကြားဖြတ် ရွေးေ...
အားလုံးလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားစာရ...
မြန်မာအစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးရေးအတွက် အကြံပြုကြရန် ကရ...
ရဲဘော်သုံးကျိပ် သွေးသစ္စာနေ့ အလှူ ( ရုပ်သံ သတင်း )
မြန်မာပြည်၏ အနုပညာရှင်အားလုံးနီးပါး ပူးပေါင်းပါဝင်...
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂျပန် နိုင်ငံခြာ...
လှည်းတန်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှု နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်...
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ နှစ်ကြိမ်ကျတဲ့ ထူးခြားသော ကရင် နှစ်...
NLD လူငယ်များ ပညာရေး ရန်ပုံငွေ တေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲ ...
နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလို ( စတာဘက်စ် ) ဘုရားကျောင်းတွ...
မွန်အမျိုးသားနေ့ကို ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအုန်းမြင့် ကြိုဆ...
ကချင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေ အတွက် လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အေ...
အမေကပြုံး . . . . . .သားကရီပေါ့ .. . . ကျော်သူ
အားလုံးအတွက်. . . . . . . .ခရစ်စမတ် တေးလက်ဆောင်
ပညာရေးရန်ပုံငွေ တေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲ အတွက် ဒုတိယ အကြ...
လူရွှင်တော် ဇာဂနာ နှင့် အနုပညာရှင်များ ၊ နိုင်/ကျဉ်...
ပါတီမှတ်ပုံတင် ကိစ္စအပြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဌများ နှင့်ေ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အဖွဲ့ နေပြည...
အစိုးရနှင့် KNU အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဘားအံတွင် လက်မှတ်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်မှ ဥက္ကဌများနှင့်...
ကြိုတင်မဲကို အမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်မည်
အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူးနှင...
ပါတီဝင်ဟောင်းများ ပြန်လက်ခံရေး NLD စိစစ်မည်
အင်းစိန် မီးရထား ဌာနပိုင်နယ်မြေပေါ်က ဆိုင်ခန်းတွေ ဖ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ NLD ပါတီ မှတ...
ထောင်ဒဏ်တသက် ကျခံနေရတဲ့ နိုင်/ကျဉ်း ကိုသက်နွယ်(ခ) ...
ဒုက္ခသည် များအား ရန်သူဟု နမ့်ခမ်းမြို့ ကယ်ဆယ်ရေး အဖ...
မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် အစိုးရကိုယ်စားလှယ် ပဏာမ ငြိမ်...
နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ထိုက်တန်သော နေရာပြန်...
ပြည်ပရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများကို ၀င်ငွေခွန် ကင်းလ...
လွတ်လပ်ရေးနေ့ မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ထပ်လွှတ်မယ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဗိုလ်ချုပ် အကြောင်း ပါရှိ...
မြန်မာ ဒုက္ခသည် ရခိုင်နှင့် ချင်း များကို ဘင်္ဂလာဒေချ...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို နှစ်သုတ်ခွဲ၍ လွှတ်မည်
ကရင်သက္ကရာဇ် ( ၂၇၅၁ ) ခုနှစ် ၊ ကရင် နှစ်သစ်ကူးနေ့ အ...
ကျွန်းလယ် ရောင်းဝယ်ရေး သမဝါယမ အသင်း လီမိတက် အသင်းသ...
ဗေဒါ ဆယ်ယူသည်ကို ငါးခိုးဖမ်းသည်ဟု အင်း လေးလံ ဆွဲသူ...
သရုပ်ဖော် ပန်းချီဆရာ မောင်မောင်သိုက်၏ အမှတ်တရ ပန်း...
NLDပါတီ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံကျင်းပရန်စီစဉ်
စင်္ကာပူမှ မြန်မာ ငွေလွှဲ ဒေါ်လာ ၄.၅ သန်း လိမ်ယူထွက်ြေ...
လှည်းတန်းလမ်းဆုံ ဗုံးကွဲမှု နောက်ဆက်တွဲ ရရှိသော သတင...
ထောင်အာဏာပိုင်များမှ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အပေါ်...
သစ်တောဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ လာဘ်စားမှု့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသား ၁၀ ဥ...
'အဲ့ဒီအခန်းဖြတ်' က ဖြစ်ရပ်မှန်ဟု ဒါရိုက်တာ ဝိုင်း ...
၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီလတွင် အစိုးရနှင့် သွားရောက် တွေ့ဆုံမည...
ရန်ကုန်ဗုံးကွဲမှု အမျိုးသမီးတစ်ဦးသေဆုံး ( ရုပ်သံသတ...
အိန္ဒိယရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပို့ချချက် (ဆောင်းပါးရှင် သီတ...
အရှင်ခေမာနန္ဒ (မိုးသု-မန္တလေး) သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ....
သမီးမေမေကို လူဆိုးတွေ သတ်သွားတယ် ( သတင်း ဆောင်းပါး...
ကျူရှင်ခ မတက်နိုင်တဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ကျောင်းသူ ကေ...
လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာရုပ်ရှင်ပွဲတော် ဇာတ်ကားပေါင်း ၁၈...
လူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ၈၈ ကျောင...
ချင်းအမျိုးသားသွေးစည်းမှု အားသစ်တရပ် ပေါ်လာပြီဟု စီအ...
မဟနဆရာတော်တွေထံ မေတ္တာရပ်ခံ လျှောက်ထားလွှာပေးပို့
'မီးဟုန်းဟုန်းတောက်မည့် မြန်မာပြည်' လက်ကမ်းစာစောင်...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်မှစ၍ မီတာခများကို...
ဦးကောင်းမြတ်ထွဋ် အပါအဝင် (၁၈)ဦး၏ မြန်မာအမျိုးသား...
ထိုင်းနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ရွှေတိဂုံသုိ့ သွားရောက် ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ပြည်သူ့...
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်အောင်ကျော် ကျဆုံးသည့် ၇...
သမိုင်းဝင်၍ သမိုင်းမတင်လိုက်ရသော ကရင်တိုင်းရင်းသား...
You Tube မှာ ခေတ်စားပြီး လူကြည့်များနေတဲ့ ( ဆင်ဆြာ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ် သို့ UNI...
ထောင်တွင်း၌ ထောင်ကျ ခံနေရတဲ့ သံဃာများ အတွက် ကျန်မာ...
ချင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၏ နေအိမ်မီးလေ...
လူထုခေါင်းဆောင်နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ယင်းလ...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ ခေါင်းဆောင်ေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အနုပညာရှင်တွေ ထပ်မံတွေ့ဆုံ
ချင်းအမျိုးသား တပ်ဦး၏ အရေးပေါ်ညီလာခံ အောင်မြင်စွာ ...
ထိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု...
ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ကကျရောက်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရွှေ...
အာဏာရှင်ဟောင်း နှစ်ဦး နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံ
ကချင်တောတွင်း ဒုက္ခသည် စခန်းတခုအား တပ်မ(၉၉)စစ်ကြောင...
မိုးထက်မြင့်သော စိတ်ထားများ. ( ဓာတ်ပုံ သတင်း )
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ရဲ့ မြန်မာပြည်ခရီး လေ့လာသူတွေ သ...
ထိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင် ရှင်နာဝပ် ( တရားမ...
နိမ့်ကျနေသော ပညာရေးကို မြှင့်တင်နိုင်ရန် အတွက် ခရမ...
ဗန်းမောက်မြို့ မြို့နယ်အောင်နိုင်ရေးအတွက် အစည်းအဝေ...
ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့ရများအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ)၌ ကျင်းပသော မိ...
မှတ်ပုံတင်ကိစ္စ NLD ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် တွေ့...
ရောင်ခြည်သစ် အခမဲ့ ပညာဒါနကျောင်းဖွင့်ပွဲ ဖိတ်ကြားလ...
NLD ခေါင်းဆောင်သစ် ရွေးချယ်ပြီး။
မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအီ မီးရထားပေါ်တွ...
HIV - AIDS ဝေဒနာရှင်များအတွက် NLD လူငယ်များ ရန်ပုံ...
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ အမတ်အချို့ NLD ပါတီသို့ ပြောင်း...
ဗိုလ်ချုပ်ကတော် ဒေါ်ခင်ကြည် နေရာလည်း သရုပ်ဆောင်သစ်သ...
2010 ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါတီထောင်ခွင့်မပြုခဲ့သော နို...
ရွေူကောက်ပွဲ မကျင်းပနှိုင်ခဲသော ဒေသများတွင် ကြားဖြ...
ကြိုတင်မဲကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်မည်ဟုပြော။
သုခရိပ်မြုံတွင် ကျင်းပသော ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် Happy New Year 2012 ...
မှတ်ပံတင်မည့် NLD ခေါင်းဆောင်အမည်စာရင်း ဒီဇင်ဘာ ၁၉...
ရန်ကုန် ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ရွှေညဝါကျောင်းတိုက်မှ ရွှေညဝါဆရ...
NLD ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားများ ပညာရေးရံပုံငွေေ...
အတိတ်က ဟာတွေကို မေ့လိုက်ပါ အခုကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ...
ယုန် နှစ်မှ နဂါးနှစ်သို့ ကူးပြောင်းခြင်း၏ အခြေအနေ။...
ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်နှင့် ၁၈ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် ဟင်္သာတ...
အကျဉ်းသားများ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ဇန်နဝါရီလ ထုတ...
တရားမျှတတဲ့ ဆင်ဆာအဖွဲ့ဖြစ်ရမယ်လို့ပဲ ပြောခဲ့တာပါ (...
သတင်း အချက်အလက်များ မေးမြန်းနှိုင်သည့် စင်တာ စတင်ဖ...
ကချင်ပြည်နယ် (Dingga Yang)ရွာရှိ ခရစ်ယာန် ဘုရားကျေ...
NLD ပါတီ၏ ပညာရေးရံပုံငွေပွဲတော် ပြုလုပ်မည့်နေရာေ...
ပါတီ ၄ ခု ကြံ့ဖွံ့ နှင့် မဟာမိတ်ဖွဲ့။
ဦးဝင်းထိန် မိတ္တီလာ ၊ ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်း ကျွန်းစ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် NLD ဥက္ကဌ ဖြစ်လာ...
ကချင်ပြည်နယ် စစ်ပွဲရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရလာဒ်များ ( ရုပ...
ဒီမှာ ယူနီဖေါင်းနဲ့ မင်းတို့ကို ပစ်သတ်လို့ ရတယ်လို...
ရွှေညဝါ ဆရာတော်ကိစ္စနှင့် ပါတ်သက်၍ နိုင်ငံတော် သံဃမဟ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဇာတ်ကားအတွက် သရုပ်ဆောင်အသစ်တွေ...
မြန်မြန် ပေး - မြန်မြန် ဆပ်. . . . . . .
ထားဝယ် ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ...
ချင်း အမျိုးသားနေ့ တရားဝင် ကျင်းပခွင့်ပြုရေး တောင်...
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲအား ( ဝ ) အထူးဒေသ ၂ နှင်...
ကိုဇာဂနာ နှင့် အဖွဲ့ ထိုင်းကိုရောက်နေ။
အဖွဲ့ချုပ် တာဝန်ပေးအပ်ပါက ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည်ဟု ဒေါ်...
နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့ ဖျက်သိမ်းရေး လှုတ်ရှ...
ကေအိုင်အေ တပ်ဖွဲ့က ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အေးချမ...
ကချင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ( ၄၀၀၀ )ကျော် ကျန်းမာရေး စောင...
နိုင်ငံရေးပါတီများကို ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှုမရှိဘဲ လွ...
မန်းငြိမ်းမောင် ကို ထောင်ဒါဏ် ၁၇ နှစ်ချမှတ်
ကော်မရှင်အနေဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကြိုဆိုကြေ...
မြန်မာပြည် မငြိမ်းချမ်း၍ ကမ္ဘာက အထင်သေးကြောင်း ဝန်ြ...
ရွှေညဝါ ဆရာတော်ကို ကျောင်းတိုက်မှ ဖယ်ရှားမခံရစေရန်အ...
စတုတ္တ အကြိမ် GMS ထိပ်သီး အစည်းအဝေ မြန်မာနိုင်ငံက အ...
ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စ...
ရွှေညဝါ ဆရာတော်အား အရေးယူမှု့ ကိစ္စနှင့်ပါတ်သက်၍ ဒေါ်...
ရွှေညဝါ ဆရာတော် ကိစ္စနှင့်ပါတသက်၍ နိုင်ငံတော် သံဃာ့ ...
ရွှေညဝါ ဆရာတော် ကျောင်းတိုက်မှ ထုတ်ဖယ်ရန် စီစဉ်တဲ့အ...
ရွှေညဝါ ဆရာတော်အား စိုးရိမ်မှု့နဲ့ ရောက်ရှိလာကြတဲ့ ...
ရွှေညဝါဆရာတော်အား လူဝတ်မလဲရေး နာယကဆရာတော်များ လက်မှ...
သာသနာဥသျှောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရဟန်းတော်များအဖွဲ့ခ...
အစိုးရက လိုချင်နေသော ( မီးဟုန်းဟုန်း တောက်တော့မည့်...
ရွှေညဝါ ဆရာတော်ကို သံဃာတော်အဖြစ်မှ ရပ်စဲပြီး ကျောင်...
ပညာရေးတက္ကသိုလ် လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း (TTC) မှ ဆရာတဦး...
သါဓု ပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်၏ ထူးခြားချက်များကို ၈၈ မျိ...
သံဃာ့ မဟာနာယက ဆိုတာ ဘာလဲ ?
ရွှေညဝါဆရာတော်ကို ကျောင်းတိုက်မှ ဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် စင်္ကာပူနို...
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းအတ္တုပ္ပတ္တိ ရုပ်ရှင်အတွက် ဗိုလ်ခ...
လာဖမ်းရင် လိုက်ဘို့ အဆင်သင့်ဟု ရွှေညဝါဆရာတော်မှ မိန...
အခက်အခဲမျိုးစုံ၊ လိမ်လည်မှု့မျိုးစုံဖြင့် ကြုံတွေ့...
ကြားဖြတ်ရွေးကာက်ပွဲ မှတ်ပုံတင် NLD ခေါင်းဆောင် အမည...
ရွှေညဝါ ဆရာတော်ကို အရေးယူပေးရန် နိုင်ငံတော် သံဃာ့နာ...
နိုင်ငံရေးဆန်တဲ့ အနုပညာကို ပရိတ်သတ်အတွက် ဖန်တီးပြသ...
ကုလသမဂ္ဂ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဒုက္ခသည်စခန်းရောက်။
တောင်ဒဂုံ စက်မှု့ဇုံရှိ အောင်စိန်လင်း သစ်အချောထည် ...
(မ.ထ.သ ) ဒု-ဥက္ကဌ ဗိုလ်မှူးအောင်မြင့် အာဏာအလွဲသုံးစ...
ကောလိပ်ကျောင်း ငါးကျောင်းတွင် ပထမနှစ်ကျောင်းသားမျာ...
ဗြဟ္မစိုရ်နှလုံးသားအသင်းမှ တောင်ဒဂုံရှိ HIV / AIDS ...
၂၀၁၀ ခုနှစ် အမျိုးသားစာပေ တသက်တာဆု ရရှိသူများ အမည်...
မြို တိုင်းရင်းသားပါတီ လျှောက်လွှာတင်။
ရိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဝန်ထမ်းများ လျှို့ဝှက် ခန့်အပ်...
၈ျပန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာပြည် သွားမည်။
တရုပ် ဝန်ကြီးချုပ် လာမည့်သတင်းပါတ်အတွင်း မြန်မာပြည...
သမ္မတ ( အစစ် ) နဲ့သာ ဆွေးနွေးလိုတဲ့ KNU
အစိုးရ၏ အလှူ KIO ဒုက္ခသည် ကော်မီတီ လက်မခံ။
ဘိုကလေးမှာ မတော်တဆ ပေါက်ကွဲမှု့ ၅ ဦးဒါဏ်ရာရ။
UNICEF ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ လိုင်ဇာ သို့ ရောက်ရှိ
မြန်မာ သတင်းအချက်အလက် Call Centre ယာယီ ပိတ်မည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အခမ်းအနား ဘိုကလေ...
ဗိုလ်ချုပ်ပုံ နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရုပ်ပုံပါ လ...
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ( မြန်မာ ) ရုံ;ချုပ်တွင် ကျင်းပပြ...
ဖမ်းဆီးထားတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ဇန်နဝါရီလ...
ကလေးသူငယ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု့ ပပျောက်ရေးနေ့ ထိုင်...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD မှ ( ဒီလှိုင်း )...
ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ကေအိုင်အို အဖွဲ့များနှင့် နိုင်ငံေ...
စာရေးဆရာမကြီး စောမုံညင်း (ခေါ်) ဒေါ်ရင်ရင် ကွယ်လွန်။...
စင်္ကာပူ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာပြည် လာမည်။
ကြံ့ဖွံ့ ပါတီနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းမှာ ပူးပေါင်းရန်မဟု...
ဗြိတိသျှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝီလျှံဂိတ် မြန်မာနိ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္တုပ္ပတ္တိ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရန် ...
ကချင်ပြည်နယ် ထိုးစစ်ရပ်ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ကြိုးပမ...
ဘူးသီတောင် ထောင်အတွင်း နှစ်ရှည်အကျဉ်းကျခံနေသူ နိုင...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ( ကွယ်လွန်သူ - ...
မြိတ် ကျွန်းစုကို သိမ်းယူဘို့ တရုပ်ကြံစည်နေပြီ။
ကချင်ပြည်နယ်မှ ဒုက္ခသည်များအတွက် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံရော...
အစိုးရသစ်လက်ထက် အာဆီယံနှင့်ပါတ်သက်သည့် ဝန်ကြီးအဆင်...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကို နိုင်ငံရေးပါတီအြ...
ဗိုလ်ချုပ်ကို အမှတ်တရ လေးစားတဲ့အနေနဲ့ - ဗိုလ်ချုပ်...
အစိုးရ နှင့် ကလိုထူးဘော အဖွဲ့ ပမာဏ ငြိမ်းချမ်းရေး ...
ကန်ပိုင်တီ တရုတ်နယ်စပ်မှ ကချင်ဒုက္ခသည်များ အရေးပေါ်အ...
ကျီစု ဆေးခန်းဖွင့်ပွဲနှင့် Health Care Helpless Pa...
ကချင်ပြည်နယ် ထိုးစစ်ရပ်ရန် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ပြည်ထောင်...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်း...
ကျူရှင်ဆရာ ဦးအောင်ဖေ တွံတေးမြို့တွင်း တကိုယ်တော် ...
အမေ့ထဘီစ ခေါင်းမှာပါတ်စို့ (တေးသီချင်း)
သာမည ဆရာတော် ပျံလွန်တော်မူခြင်း ( ၈ ) နှစ်ပြည့် အဟ...
ပညာရေး ရန်ပုံငွေ ၈ီတပွဲတော်နှင့် ဈေးရောင်းပွဲတော်...
စင်္ကာပူမှာ မြန်မာအမျိုးသမီးတဦး သေကြောင်းကြံမှု့ ထပ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စီစဉ်တဲ့ပွဲ ဇော်ဝင်းထွဋ် လည်းပ...
ရွှေညဝါ ဆရာတော် က ( ဘာကြောင့်မှန်မသိဘဲ ၄ - ၅ - ၆ ရ...
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်ရှိကြောင်း မ...
အပစ်ရပ်ခြင်းသည် လူ့အခွင့်အရေး ကျူးလွန်မှု့အားလုံးပ...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီး မလိမ...
နိုင်ငံရေးအရ ညှိနှိုင်းဆောငသ်ရွက်မှု့ မပြေလည်ပါကေ...
ရန်ကုန်မြို့ခံတွေဆီက ဗုဒ္ဒမြတ်စွယ်တော်ပြပြီး တရုပ်က...
မြန်မာများ မလေးရှားတွင် ( ၁၀ ) နှစ် အခြေစိုက်နေထို...
မှု့ခင်းကျဆင်းရေး စီမံချက် မြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့တို့ လုပ...
ကချင် လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် ( KIA ) နယ်မြေအတွင်း ထိုး...
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ စုပေါင်း၍ ကခ...
အဖမ်းခံထားရတဲ့ ပဒို မန်းငြိမ်းမောင် ကို မင်္ဂလာဒုံမှ...
ပါတီဝင်များ ပါတီနိုင်ငံရေးကိစ္စဖြင့် ခရီးသွားလိုပါက...
မြန်မာပြည်အနာဂါတ်အတွက် ( YEC ) စင်္ကာပူကျောင်းသားလူင...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်မပေးဘူးဆိုရင်တော့လာ...
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းတည်ဆောက်နေသော ( ရွှေဂက်စ်) စီမံကိ...
Chatrium ဟိုတယ်၏ ၂၀၁၂ နှစ်သစ်ကူးအကြို ညစာစားပွဲ။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီသစ်ပါတီ NLD ပါတီ တံဆိပ်နှင့် သ...
ဆေးပေါင်းခသည့် လကြတ်ခြင်း ( သတင်း နှင့် ဗွီဒီယို )...
ဥပဒေများပီပြင်မှ လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများ ပီပြင်မည်ဟု ...
လာမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ်မျာ...
အချိုမှုန့် ၊ အချိုရည်မျိုးစုံ အပါအဝင် ကုန်ပစ္စည်း ...
NDF နှင့်ကြံ့ဖွံ့ ပူးပေါင်းလိုက်ပြီဟု ဖေါ်ပြပါရှိ။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အဋ္ဌမအကြိမ် ပါတီညီလာခံ ကျင်းပမည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာ တိုင်းပြည်ကို ...
အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေး သူရ ဦးရွှေမန်း ပြောပြန်ပြ...
NLD ပညာရေး ရံပုံငွေ ဈေးရောင်းပွဲတော် ခွင့်ပြုချက်...
နာမကျန်းဖြစ်နေသော ကဗျာဆရာ ပိုင်စိုးဝေ အတွက် ဇာဂနာ ...
တတိယ အကြိမ် မွန်အမျိုးသမီးများ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကျင...
ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မီတီ KNU နှင်...
တရုတ် အစိုးရက ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကို စတင်နှင်ထု...
NLD ပါတီ ပြန်လည်တည်ထောင်ခွင့် အဖွဲ့ဝင်များ စစ်ဆေးခ...
၈၈ - ပြည်သူ့အင်အားစုပါတီအား နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် တည...
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် ပဏာမဆွေးနေ...
ကော့မှူးမြို့နယ်တွင် ရွှေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန...
တရုတ် ရေနံပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းမှာပါဝင်နေတဲ့ နော်ဝေ...
မြန်မာ အာဏာပိုင်များ ဖမ်းထားသည့် အန္ဒိယ သတင်းထောက်န...
နယ်ထိန်း ရဲတပ်ကြပ်ကြီး တဦးက လူငယ်တဦးကို နေအိမ်ခြ...
၈၈၈၈ အရေးအခင်းကာလက ဆရာဝန်တဦး အမည်ဖြင့် ရေးသားထားေ...
မြန်မာအစိုးရနှင့် ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSA အဖွဲ့ အပစ်...
စိန်မေရီ ရိုမန်ကတ်သလစ် နှစ် ၁၀၀ ပြည့် အခန်းအနားပိတ...
ကွယ်လွန်သူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အတွင...
ကွယ်လွန်သူ သခင် လှကွန်း (ခ ) စာရေးဆရာ မိုးညို ၏ ကိ...
ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ စိန်မေရီ ကက်သီဒြယ် ကျောင်းတော် ...
ထားဝယ်ခရိုင် ရေဖြူ မြို့နယ် ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းကြေ...
KIA နှင့် တရက်တည်းဖြစ်ပွားသော တိုက်ပွဲအတွင်း မြန်မ...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများစာရင်းအား အများပြည်သူထံ ဖြ...
RSF မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် ချီးမြှင့်သည့် သတင်းမီဒီယာ...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ချင်းပြည်နယ် လူမှု့လိုအပ်ချက်မျ...
ညီနောင် ပါတီ နှစ်ခုကို ကော်မရှင်က သတိပေး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဦးတေဇ တွေ့ဆုံခဲ့ သည့်သတင...
အနာခံ မှ အသာစံရ . . . . . . . . ကျော်သူ။
မြန်မာ့ လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအား နိုင်ငံရေး...
အနုပညာရှင်တွေလည်း ငြိမ်းချမ်းစေလိုတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်...
အလုပ်သမားများ သမဂ္ဂ တည်ထောင်လိုမှု့ ပယ်ချခံရ။
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် လွှတ်တော်ရေးရာကော်မီတ...
ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း နှင့် အယ်လ်ဂျာဇီး...
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအဖွဲ့ လစာတွေ ဘယ်လိုယူထားကြ...
မြန်မာ့အကြီးဆုံးရွှေကြောတွင် တူးဖေါ်ရေးလုပ်ငန်းများ ...
ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမား ရွှေတိဂုံစေတီကို ဖူးမှေ...
ယခင် NLD ပါတီအတွင်းရေးမှူး ဦးလွင် ကွယ်လွန်။
ဆန္ဒပြရန် လျှောက်ထားချက် ဆိုင်းငံ့ခံရ။
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်များ မြန်မာ လက်ခံမည်ဟုဆို။
ဒီမိုကရေစီ မိတ်ဆွေနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေး တွေ့ဆုံ။
ရန်ကုန်တွင် တိုင်းရင်းသားအရေး ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်ပမည်...
ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး သခင်လှကွန်း ကွယ်လွန်။
နှင်းဆီ အဖွဲ့သားများက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္တုပ္ပတ္တ...
မတရား ဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတော့မည့် လယ်သမားကြီးတဦးအား...
နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့်သာ အဖြေရှာရ...
NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခမောက်တံဆိပ်အစား...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ မလွှတ်မချင်း ရခိုင်ဒီမိုကေ...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ မလွှတ်လျှင် ရွေးကောက်ပွဲမဝ...
ပြည်ပ ရောက်နေသူများ NLD အဖွဲ့ဝင်နှိုင်။
ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများတွင် နိုင်ငံရေးနှင့် ဘာသာရေး ...
အမေရိကန် သမ္မတ ၏ ပေးစာနှစ်စောင်။
အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ ကရင်လူငယ် ကျောင်းသားများ မော်လမြ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကော့မှူး မဲဆန္ဒနယ်တွင် ဝင်ရောက်ယ...
စစ်ကိုင်းတိုင်း NLD ပါတီ အောင်နိုင်ရေး အစည်းအဝေးကျ...
နာရေးကူညီမှု့အသင်း ( ရန်ကုန် )မှ ကချင်ပြည်နယ် စစ်ေ...
၁၇ လကြာအောင်ပိတ်ထားသည့် မဲဆောက် မြဝတီတံတား ဒီနေ့ပြ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကော့မှူးမဲဆန္ဒနယ...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရန် စီစစ်ရေးလုပ်ငန်...
လှည်းကူးမြို့နယ် NDF ပါတီမှ ပါတီရုံးခွဲဆိုင်းဘုတ်မ...
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ဘောရဘာ ကျေးရွာအနီး...
UNFC ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် ဖွဲ့စည်းမည်။
ကချင်ပြည်နယ်မှာ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေ ပိုများလာနေ ။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နိုင်ငံတဝှမ်းတွင် ရံ...
မြန်မာ့ နိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံး ရွှေကြောသစ်တွေ့ရှိ နှ...
RSF သတင်းမီဒီယာဆု Eleven Media Group စာရင်းသွင်းခံ...
ဆန္ဓပြခွင့် ဥပဒေသည် ဒီမိုကရေစီ နည်းမကျသေး။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ် ဗိုလ်ချုပ် ...
လူမှ့ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ဒေါ်လာ ၁.၂ သန်း ကူညီမည်။
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီလူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြ...
ဦးသန့် အထိမ်းအမှတ် ကြေးရုပ်နဲ့စာကြည့်တိုက် ပန်းတေ...
ကရင် တိုင်းရင်းသားများ၏ နေ့ထူးနေ့မြတ်များ
လွတ်လပ်ရေးနေ့တွင် ဇာဂနာ နှင့် သီးလေးသီး အငြိမ့်ပြန...
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲရေး အေ...
အစိုးရ အဖွဲ့ နှင့် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအဖွဲ့ အပြစ်...
ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန...
တပြည်လုံး အပစ်ရပ်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှု့ ...
ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံထူထောင်ရာတွင် အကျင့်စာရိတ္တ အရေြး...
အမေရိကန် နှင့် မြန်မာ တွေ့ဆုံမှု့ ရလာဒ်များ။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီသစ်ပါတီ အနေဖြင့် NLD ပါတီနှင့်...
ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး ဦးတင်ဦး ( NLD )ဒုတိယ ဥက...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ယူကေမှ ၂၀၁၁ ချာသန်ဟောက်စ် ( ...
အော်စလိုမြို့မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ မြန်မာစားသောက်ဆိုင် မ...
မြန်မာလို လေ့လာနှိုင်မဲ့ အိုင်တီ Website ကောင်းတခ...
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် ရန်ကု...
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပြန်လည်မထွက်ခွာခင် ...
ဆန္ဒပြခွင့် ဥပဒေမူကြမ်း ပဟေဋ္ဌိ။
ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ တရားပွဲကျင်းပမည့် သတင်းကြောင့် လ...
ဒီမိုကရေစီ လမ်းပေါ်မရောက်သေးဟု လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်ေ...
ဟီလာရီကလင်တန်၏ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်အတွင်း ပြောကြားချက...
ဟီလာရီကလင်တန် နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံ...
နော်ဝေနိုင်ငံ တွင် ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့က...
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် ဒေါ်အေ...
အိုဘားမား ကိုယ်တိုင် လက်ရေးဖြင့် အမှာပါးလိုက်သောစာ...
သောကြာနေ့မှာ အမေရိကန်သံရုံးတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံခြာ...
သီးလေးသီး လက်ကျန်အဖွဲ့ ပြန်ရောက်ရှိလာ ဇာဂနာ ဦးစီး...
အိန္ဒိယ နိုင်ငံ ဒက္ကားမြို့တွင် ရခိုင်အမျိုးသမီးများ...
ယနေ့ည ညစာစားပွဲတွင် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု...
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် နေပြည...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လွှတ်ပေးသွားမယ်လို့ သူရ ...
နေပြည်တော် သင်္ဂဟ ဟိုတယ်တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလ...
UNFC ၏ ပထမအကြိမ် ဗဟိုကော်မီတီ အစည်းအဝေး။
စစ်ရေးနည်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးမရနှိုင်ကြောင်း KIO ကထ...